बराहक्षेत्रमा पहिलोपटक कांग्रेसको जीत ! इतिहास रच्ने रमेश कार्कीका यी हुन् जीतका ‘फ्याक्टरहरु’
बराहक्षेत्रः वि.स. २०७३ सालमा साविक बराहक्षेत्र, भरौल, प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर र मधुवन गाविसलाई गाभेर बराहक्षेत्र नगरपालिका बन्यो । तत्कालीन ०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित निलम खनाललाई बराहक्षेत्रबासीले प्रमुख नगरप्रमखका रूपमा अनुमोदन गरे । यद्यपि यस् स्थानमा कम्युनिस्टहरुले आफ्नो ‘लालकिल्ला’को रूपमा दाबी गर्दै आएका छन भने कांग्रेसको ‘पराजित यात्रा’ देखिन्छ । अघिल्लो स्थानीयतह चुनावमा समेत बराहक्षेत्रका ११ वडामध्ये ८ वटा वडामा एमालेले जीत निकालेको थियो भने कांग्रेस ३ वटा वडामा खुम्चिएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार निलम खनालले १४ हजार ४ सय ४६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने नेपाली कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार बाबुराम बिष्टले ११ हजार ४ सय ८९ मत प्राप्त गर्दै पराजित भएका थिए ।
स्थानीयतह निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको चुनावी तालमेलपछी यस् स्थानमा कांग्रेसले एमाले ‘बिरासतु भत्काएको छ । एमालेका उनै निलम खनाल यसपटक पुनः नगरप्रमुख पदमा उमेदवार बनेका थिए भने गठबन्धनका तर्फबाट रमेश कार्की चुनावी मैदानमा थिए । निर्वाचन अधिकृतका अनुसार कार्कीले १९ हजार २ सय ९३ मत पाएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी खनालले १४ हजार १ सय ५८ मतमा चित्त बुझाएका छन् ।
एमालेजनले आफ्नो ‘गड’ भन्दै आएको बराहक्षेत्रमा रमेश कार्कीको चुनावी जितपछी यहाँ एकखाले तरंगनै पैदा भएको पाइन्छ । यसको कारणतस् जनताले चाहेर परिवर्तन नै हो । वर्तमान नगरको नेतृत्वसँग बराहक्षेत्रबासी असन्तुष्ट भएकै कारण हाल यहाँ रहेका ११ वडामध्ये ८ वडा कांग्रेसले जितेको छभने एमाले उपमेयरसहित ३ वडामा खुम्चिएको छ ।
रमेश कार्कीको जीतका ‘फ्याक्टरहरु’
आफ्ना मूख्य प्रतिस्पर्धी निलम खनालभन्दा उमेरले युवा उमेदवार कार्कीमा व्यबहारिक परिपक्वता भने खनालको तुलनामा कम छैन् । नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको अग्रणी संस्था चक्रघट्टी जेसीजको वर्ष २०१७ को अध्यक्ष समेत भइसकेका कार्कीको तार्किक क्षमता र भाषण कला उत्तिकै आकर्षक छ । सरल, मिलनसार र युवापंक्तीको भावाना बुझ्नसक्ने कार्कीलाई यसपटक यहाँका थुप्रै युवायुवतीहरुले साथ दिएका थिए । कार्कीको उम्मेद्बारीपश्चात् सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना प्रकट गर्ने युवापंक्तीलाई नियाल्दा प्रायशस् स्वतन्त्र र बाह्य दलका प्रतिनिधि युवाहरू देखिन्थे । कार्की निकट एक कार्यकर्ता भन्छन्, ‘रमेश कार्कीको जीतमा प्रमुखनै भनेजस्तो भूमिका युवाहरुको छ ।’
निलम खनालको दोहोर्याइँ
बराहक्षेत्र नगरका प्रथम मेयर निलम खनालले जनभावनाअनुरूपको कार्य गर्न नसकेको भन्दै उनी विरुद्ध जनगुनासोको लिस्ट लामै थियो । आम सर्वसाधारण मात्रै होईन, नेकपा एमालेभित्रै बेलाबेलामा असन्तुष्टीको पराकम्पन झल्किने गर्दथ्यो । सोही बखत एमालेले पुनः उनै खनाललाई दोस्रोपल्ट मेयरको टिकट दिएपछी रमेश कार्कीको जीत सुनिश्चित भएको विश्लेषण हुन थालिसकेको थियो । त्यसमा पनि आफ्नै दलका नेता राजु अधिकारीले खनालको विरुद्धमा उम्मेद्बारी दिएर असहयोगको खाडल खन्न सुरु गरेभने गौण रूपमा दलका अन्य नेताहरूले समेत सहयोग नगरेको स्रोतको दाबी छ । उम्मेद्बारी मनोनयन गर्दैगर्दा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा राजु अधिकारीले भनेका थिए, ‘बराहक्षेत्रमा निलम खनालले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, नाताबाद र कृपाबादको विरुद्धमा मैले उम्मेद्बारी दिएको हो ।’
सामाजिक कार्यको ‘कनेक्सन’
अघिल्लो स्थानीयतह चुनावमा बराहक्षेत्र ७ को अध्यक्ष पदका उमेदवार बनेका कार्की अन्ततः उमेदवारमै सीमित बने । तत्पश्चात् उनले आफूलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने निर्णय गरे । नभन्दै त्यसपछि स्थानीयस्तरमा सामाजिक कार्यमा गहिरोसँग जमेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । कोरोनाकहरमा जनताको घरदैलोमा गएर माक्स, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ सामाग्री वितरणदेखि वर्षायामको बाढीका बखत खाधान्न वितरण गर्ने कार्यसम्मको धेरैले खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । त्यस्तै, नगरमा हुने गरेका विभिन्न खाले खेल प्रतियोगितालाई आर्थिक सहयोग, रक्तदान कार्यक्रम संचालन, मन्दिर तथा सार्वजनिक सम्पतिको निर्माण र प्रवद्वर्नमा सहयोग गर्ने गरेको उनको इतिहासले बताउँछ ।
पार्टीभित्रको दर्विलो साथ
बराहक्षेत्र नगरपालिकाको मेयर पदका लागि यसपटक १४ जनाको नाम सिफारिस भएर क्षेत्रीय समितिहरुमा पुग्दा स्थानीय चकित थिए । अझ कार्यकर्ताहरू भने चिन्तित थिए( टिकट नपाउनेले पार्टीलाई असहयोग गर्नेछ । तर वास्तविकता त्यस्तो भएन । यसपाली रमेश कार्कीलाई नगरप्रमुख बन्नलाई कसैले असहयोग गरेनन्, एक नेताले भनें । मेयरको टिकटको लाइनमा रहेका १४ जनाबाटै सहयोग पाएका कार्कीले चुनाव जित्नेमा ढुक्क थिए, यहाँका नेता तथा कार्यकर्ताहरु । जानकारहरु भन्छन्, ‘रमेश कार्कीलाई ज्ञानेन्द्र दाइको (नेपाल सरकारका वर्तमान सूचना, प्रबिधि तथा सञ्चारमन्त्री एबम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य) सुभेच्छा हुन्जेल उनी सफल भइरहन्छन् ।’
भलै नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकपक्षले साथ दिएन तर मुलभुत रूपमा गठबन्धनका अन्य दल माओवादी र जसपाबाट सहयोग नै भएको कांग्रेसका नेताहरुको बुझाइ छ । गठबन्धनमा नरहेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समेत बिज्ञप्तीसहित नेपाली कांग्रेसका उमेदवार रमेश कार्कीलाई सघाउने निर्णय गरेसँगै कार्कीलाई सह्ज माहोल सिर्जित भएको थियो ।
को हुन्,रमेश ?
उसो त रमेश कार्कीको नाम राजनीतिक बृतमा त्यति पुरानो नाम भने होईन । नेपाली सेनाको पृष्ठभूमि बोकेका कार्की हाल बराहक्षेत्र ७ का स्थायी बासिन्दा हुन् । राजनीतिक अनुभव त्यतीधेरै लिन नपाएको भएपनि कार्कीको सामाजिक क्षेत्रमा लोभलाग्दो सक्रियता छ । जानकारहरु भन्छन्, ‘सामाजिक कार्यले गर्दा नै रमेश कार्कीलाई चिनाएको हो ।’ कार्कीले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
सन् २०१३ बाट उनी चक्रघट्टी जेसीजको माध्यमबाट सामाजिक व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन थाले । तत्पश्चात् उनी नेपाली कांग्रेसको १२ औ महाधिवेशनमा तत्कालीन महेन्द्रनगर गाउँ इकाइ समितिको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछी उनलाई राजनीतिक जगतमा चित्रित भएको बुझिन्छ । त्यस्तै, १३ औँ अधिवेशनबाट तत्कालीन सुनसरी क्षेत्र नं ६ को सचिवमा मनोनीत भएका कार्की गएको स्थानीयतह निर्वाचनमा बराहक्षेत्र ७ वडामा अध्यक्षको उम्मेदवार समेत बनिसकेका छन् । पार्टीभित्रै छिट्टै राजनीतिक माहोल बनाउन सफल कार्कीले १४ औं नगरअधिवेशनमार्फत आफूलाई नगर सभापतिमा स्थापित गराए ।